အဲဒီအကျင့် ဖြတ်ပစ်ဖို့ အခက်ဆုံးပါ...
ဆဲဆိုမြည်တမ်းရေရွတ်ခြင်းဟာလက်ဖက်ရည်၊ကော်ဖီစွဲလမ်းခြင်း၊ ဆေးလိပ်စွဲခြင်း၊ လက်သည်း
ကိုက်တတ်သည့် အကျင့် စွဲခြင်း စသည်တို့ ထက်ဖြေဖျောက်ရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ လေ့ 
မေးမြန်ခဲ့ သူ ၆၀၀ ကျော်အနက် လေးပုံတစ်ပုံကျော်(၂၆ ရာခိုင်နှုံး) သည့် သူများက ၎င်းတို့ အ
နေဖြင့် နေ့ စဉ်ပြောဆိုနေသည့် စကားများတွင် တစ်တစ်ခွခွ၊ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်မြည်တမ်းဆဲဆိုရေ
ရွတ်ခြင်းသည်သာ အဓိကအများဆုံးသုံးသည့် စကားလုံးများဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အဆိုပါလေ့ 
လာမှုစစ်တမ်းကတွေ့ ရှိခဲ့ ရပါတယ်...
ကော်ဖီကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အလွန်အမင်းသောက်သုံးစွဲလမ်းခြင်းက ၁၈ ရာခိုင်နှုံးဖြင့် ဒုတိယ
လိုက်ပြီး ထိုသူများအနေဖြင့် နေ့ စဉ် လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းအား စွန့် လွှတ်နိုင်
ခြင်းမရှိ ( ထိုအကျင့် ကိုဖြတ်ပစ်နိုင်ရန်အခက်ခဲဆုံး ) လို့ ဆိုကြပါတယ်...
လက်သည်းကိုက်တတ်သည့် အလေ့ အကျင့် က ၁၅ ရာခိုင်နှုံးရှိပြီး ၁၃ ရာခိုင်နှုံးမျှသောသူတို့ 
က ၎င်းတို့ အနေဖြင့် နေ့ စဉ် တီဗီကြည့် ရှုခြင်းကို မစွန့် လွှတ်နိုင်ကြောင်း ( အခုခေတ်တော့ 
အင်တာနက်၊ ကွန်ပြူတာပါထည့် သွင်းရမလိုဖြစ်နေပါပြီ...တစ်ချိူ့ ဆိုဖေ့ စ်ဘွတ်လို့ ခေါ်တဲ့ 
မျက်နှာစာလို့ လည်းခေါ်တဲ့ အိမ်သာနံရံလို့ လည်းအမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ အင်တာနက်လူမှု
ကွန်ယက်စာမျက်နှာကို နေ့ စဉ်မသုံးရ၊ မဖတ်ရမနေနိုင်ဖြစ်နေကြပါပြီ....
၁၀ ရာခိုင်နှုံးမျှသောသူတို့ ကတော့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ဖြတ်လိုတဲ့ ဆန္ဒ
သတိ !!! ကလေးသူငယ်များရှေ့ တွင် ဆဲဆိုမြည်တမ်းရေရွတ်ခြင်းမပြုမိပါစေနှင့် ...
သူတို့ လေးတွေပါ ထိုအကျင့် မသိမသာစွဲလမ်းသွားနိုင်ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ ရှက်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့ အကျင့် လေးတွေကိုယ်စီရှိနေတတ်ကြ
ပါတယ်... ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေထဲမှာမှ ဆဲဆိုမြည်တမ်းရေရွတ်ခြင်းဟာ ဖြတ်ပစ်ဖို့ အခက်ခဲဆုံး
အမူအကျင့် ဖြစ်နေကြောင်း လူအများစုကယုံကြည်နေတာကိုက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလှပါ
ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆဲဆိုမြည်တမ်းရေရွတ်ခြင်းဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်း
၃၀ ကထက်စာယင်တော့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ နားလည်လက်ခံလာတဲ့ ၊ အများစုပြောဆိုပြုမူ
လာတဲ့ အမူအကျင့် တစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ... ဒါကြောင့် လူတွေအနေနဲ့ ထိုအကျင့် ကို အလိုအ
လျောက်လက်ခံကာပြုကျင့် လာခဲ့ ကြပြီး နောက်မှ စွန့် ပစ်ဖို့ ပိုမိုခက်ခဲလာတာကိုတော့ အံ့ အား
သင့် ဖွယ်မရှိတော့ ပါဘူး..." လို့ (အဆိုပါလေ့ လာမှုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ သည့် ) အဖွဲ့ အစည်း
ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကဆိုပါတယ်...
Swearing is the most difficult habit to break, beating the likes of drinking too much caffeine, smoking, and chewing finger nails, according toapoll. More thanaquarter (26%) of the 600 people questioned said that using too many expletives in conversations was their biggest vice, the survey found.
Drinking too much caffeine came second in the poll, with 18% saying giving up their daily cups of tea and coffee was the hardest thing to quit. Chewing fingernails came third with 15%, while 13% said they could not give up watching television and 10% said smoking was the habit they wished they could kick.
A spokesman said: "We all have bad habits which we are embarrassed about. However, it is interesting to see that the majority believe swearing is the hardest gripe to get rid of.
"For better or worse, swearing has become more socially acceptable than it was 30 years ago. Therefore it is no wonder that more and more people are finding it increasingly difficult to kick the habit."
Labels: news: google.com